ထူးခြားတဲ့ Orient Animals Slot - Myanmar Online Game
ဒီနေ့မှာတော့ JDBYG ရဲ့ Slot ကစားနည်းတွေထဲကမှ ထူးခြားတဲ့ Slot တစ်ခုအကြောင်းလေးပြောပြချင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ Orient Animals ပါ။ နာမည်အတိုင်းပဲ တောတောင်ထဲမှာနေရာယူထားပြီးတော့ တောတွင်းတိရိစ္ဆာန် Symbol လေးတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သာမန် တောတွင်းတိရိစ္ဆာန်လေးတွေမဟုတ်ပဲ၊ Nature နဂါး၊ ရေနဂါး၊ မီးငှက် အစရှိတဲ့ အံ့အားသင့်ဖွင့် အကောင်လေးတွကိုတွေ့ရပါတယ်။
ဒီကစားနည်းက Row3ခု Reel5ခုနဲ့ အနိုင်ရဖို့ နည်းလမ်း 243 ခုရှိတဲ့ Slot တစ်မျိုးပါ။ ဆိုလိုတာက သတ်မှတ်ထားတဲ့ Pay line အပေါ်ကွက်တိမကျပေမယ့်လဲ ဘယ်ဘက်အဆုံးကနေ ညာဘက် Reel ဆက်တိုက် Symbol တူကျတာနဲ့အနိုင်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုတော့ Pay line တွေလိုက်ကြည့်ပြီးမျက်စိနောက်စရာမလိုတော့ပဲအေးဆေးပဲ ဘယ်မှညာ ကြည့်သွားရုံပဲပေါ့။ ဒီမှာ တခြား Slot တွေနဲ့မတူပဲထပ်ပြီးထူးခြားတာက ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Reel ကိုပြန်လှည့်လို့ရတာပါ။လှည့်လိုက်လို့ Symbol တစ်ခုအနိုင်ရတော့မယ်၊ ဒါပေမယ့်ကြားထဲက Reel တစ်ခုထဲမှာဟသွားလို့ မရတော့တာမျိုးတွေ ခဏခဏကြုံဖူးကြမှာပါ။ အထူးသဖြင့် Bonus Symbol တွေပေါ့။ ဒီ Slot မှာတော့ Spin လှည့်ပြီးသွားလို့ Symbol တွေအကုန်ညိမ်သွားရင်တောင်မှ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Reel ကိုပြန်လှည့်လို့ရပါသေးတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ Betting တော့ပေးရပါတယ်။
ဒီကစားနည်းမှာ Wild ကိုတော့ပုလဲလုံးလေးပုံစံနဲ့တွေ့ရပါတယ်။ သူက Reel 2, 3,4တို့မှာပေါ်ပြီးတော့ ကျတဲ့နေရာမှာ လိုအပ်တဲ့ Symbol ကိုအစားထိုးပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ဖဲမှာဆိုရင်တော့ Joker လိုပဲပေါ့။ ဒါပေမယ့်သူအစားထိုးပေးနိုင်တဲ့ထဲမှာ Bonus Symbol တော့မပါပါဘူးနော်။ Bonus Symbol ကတော့ Free Spin တွေပေးနိုင်တဲ့ Symbol တစ်ခုပါ။ သူက Reel5ခုလုံးမှာပေါ်နိုင်ပါတယ်။ အနည်းဆုံ3းခုသာ ဘယ်မှညာ ဆက်တိုက်ကျလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ Bonus game တစ်ခုကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်!
Bonus game မှာဆိုရင်လဲ Special Symbol5ခုထဲကတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ရွေးလိုက်တဲ့ Symbol တစ်ခုပဲ Free Spin မှာပါပြီးတော့ တခြား Special Symbol တွေကတော့ပါတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုဆိုမှတော့ သူသူကိုယ်ကိုယ် Payout နှုန်းများတဲ့ Symbol ကိုပဲရွေးတော့မှာပေါ့။ ပြသနာကအဲ့မှာ Payout နှုန်းများလေ Free Spin နှုန်းနည်းလေပါပဲဗျ။ Payout နှုန်းအများဆုံး Symbol ကိုရွေးရင် Free Spin5ခါရပြီးတော့ အနည်းဆုံး Symbol ကတော့ အခါ 20 အထိရနိုင်ပါတယ်။ ရွေးချယ်မှုတိုင်းမှာလဲ multiplayer တွေမတူဘူးဆိုတာမမေ့နဲ့နော်။ အများဆုံးကိုရွေးမယ်ဆိုရင် Multiplayer 10x 15x 30x ထဲကတစ်ခုခု Random ကျမှာပါ။ တစ်ခြား ရွေးချယ်မှုတွေအတွက်လဲ မတူတဲ့ Multiplayer တွေရှိပါတယ်။
ကဲ.. အဲ့တော့ Payout နှုန်းများရင် Free Spin နည်းတာတော့ဟုတ်ပါပြီ။ Payout နှုန်းတွေကဘယ်လောက်တွေတုံးလို့ မေးလာနိုင်ပါတယ်။ အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ Payout နှုန်းတွေအကြောင်းလေ့လာလိုက်ရအောင်။ Special Symbol5ခုမှာအများဆုံးကတော့ မီးနဂါးဖြစ်ပြီးတော့3ခုတူအတွက် 24,4ခုတူအတွက် 240,5ခုတူအတွက် 2400 ပြန်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒုတိယအများဆုံးကတော့ ရေနဂါးပါဖြစ်ပါတယ် သူက3ခုတူအတွက် 18,4ခုတူအတွက် 180,5ခုတူအတွက် 1800 ပြန်ပေးနိုင်ပါတယ်။ တတိယကတော့ မီးငှက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူက3ခုတူအတွက် 15,4ခုတူအတွက် 150,5ခုတူအတွက် 1500 ပြန်ပေးနိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ အစိမ်းရောင်ကဒ်နဲ့ ကျားဖြူဖြစ်ပါတယ်။ သူက3ခုတူအတွက် 12,4ခုတူအတွက် 120,5ခုတူအတွက် 1200 ပြန်ပေးနိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ ခရမ်းရောင်ကဒ်နဲ့လိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့3ခုတူအတွက် 9,4ခုတူအတွက် 90,5ခုတူအတွက် 900 ပြန်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ရိုးရိုး Symbol တွေအနေနဲ့လဲ ဖဲ Symbol တွေဖြစ်တဲ့ A, K, Q, J, 10,9တို့ပါဝင်ပါသေးတယ်။
ကဲ.. ဒါဆိုရင် Orient Animal မှာ Bonus Symbol တွေပြန်မကျမခြင်း ReSpin လုပ်ဖို့ Ready ဖြစ်ပြီလား? အခုပဲ JDBYG ရဲ့ Slot Session ကိုလှမ်းခဲ့လိုက်ပါနော်!
အဆင့်မြင့်ကာစီနိုကစားနည်းတွေဖြစ်တဲ့ စလော့ဂိမ်း ၊ ငါးပစ်ဂိမ်း – Fishing ၊ သစ်သီးဂိမ်း ၊ Live Casino တွေကိုနေရာဒေသအမျိုးမျိုးမှဆော့နိုင်ပြီဖြစ်လို့တစ်ခါတစ်ခေါက်လောက်တော့ဆော့ကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။